Boqolaal Ka Mid Ah Ardayda Imtixaanku U Socday Ee Hargeysa Oo Maanta Mudaharaad Cabasho Ah Sameeyay, Kadib Markii Ay Ku Gacansaydheen Imtixaanka Laga Qaadayay | Araweelo News Network (Archive) -
Hargeysa(ANN)Boqolaal Ardayda Fasalada Afaraad ee Imtixaankii Shahaadiga ahaa u socday ayaa Maanta Mudaraad la hortagay qaar ka mid ah Xarumaha Dawlada, gaar ahaan Wasaarada Waxbarashada, Madaxtooyada iyo xarunta Imtixaanaadka Qaranka ee Magaalada Hargeysa. Ardaydan oo ka
loo soo diyaariyay Maadooyinkii Maanta laga qaadayay , isla markaana markii Imtixaanka loo qaybiyayba ka soo dareeray Goobihii Imtixaanku uga socday, waxa ay sheegeen in Maadooyinkaasi ay ka biyo Diideen aan laga soo diyaarin Casharadii ay qaateen, halka qaarkoodna ay ku doodayeen in xalay la bedelay Imtixaankii loogu talo galay in maanta laga qaado, kaas oo sida ay tilmaameen suuqa laga helay xalay fiidkii.
Qaar ka mid ah Ardaydan Cabashada Samaynayay oo Sababta ay isu soo baxan u sameen ku sheegay inay Xalay heleen qaybo ka mid ah Imtixaankii ay maanta u fadhiisanayeen, taasi bedelkeedana ay Saaka ku war heleen in xalayba la bedelay Imtixaankaa, laguna bedelay Imtixaan sida ay qabaan aan loogu talo gelin ardyada Dugsiyada Sare iyo kuwa dhexe toona oo Adag.
Mid ka mid ah Ardaydii Mudaharaadka samaynayay oo aanu kula kulnay Dugsiga sare ee Faarax Omar ee Hargeysa hortiisa ayaa yidhi, “waxaanu ka cabanaynaa Imtixaankii aanu saaka geli lahayn ayaa xalay la bedelay oo wax kale oo aanan dhiganba lagu bedelay, waxaana laga dhigay Taariikhdii General, Bussines-kiina waxa naloo soo diyaariyay waxaanan dhiganba, markaa taasaanu ka cabanaynaa”.
Sidoo kale Arday kale oo isna ka mid ah Ardaydaa ayaa ka waramay ujeedada isu soo baxooda, wuxuuna yidhi, “Imtixaankii xalay suuqa la soo gelyay ayaa inta la bedelay, waxa naloo keenay Imtixaan 2001 la qaaday oo laga soo dhigay 2011 iyo Imtixaan kale oo Bussines ah oo aan nalooba dhigin, waxaanan doonaynaa in sidaasi naluugu qiimeeyo Imtixaanka oo aan naluguba celin, waayo waxani maaha wax aanu dhiganay”.
Masuuliyiin ka tirsan Xukuumadda ayaa isku dayay inay la hadlaaan, iyadoo wasiir ku xigeenka waxbarshada u sheegay in aanay is fahmayn oo ay doonayaan inay la hadlaan Wasiiraddii, balse Wasiirka Madaxtooyada Xirsi Xaaji Cali oo markii danbe u balanqaaday Ardaydaa inay cabashadooda wax ka qabanayaan, isagoo la balamay maalinta beri ah. Sidaana ku degtay Xiisadii oo ay Ardaydu guryohoodii kala qabteen.